Yerli Otomobil Çakma İlanla Satışa Çıktı! | RayHaber | raillynews
mushaTHE WORLDzvekuEurope33 FranceDzimba Dzemukati Dzimhanyisa Kutengesa!
09 / 01 / 2020 33 France, zvekuEurope, THE WORLD, GENERAL, HIGHWAY, musoro wenyaya, Automotive
mota dzemukati cakma yekutengesa
Mota dzemudzimba, nzvimbo yekuchengetera yemaFrance yechipiri ine chirevo chekunyepera 'chiri kutengeswa'. Iye mutengesi anoda zviuru makumi matatu emadhora emota (anenge mazana zviuru mazana maviri TL). Mutengesi anoti mota yake zviuru gumi nemaviri emakiromita!
Maererano nenhau dzeGizem Sade kubva kuEuronews; Kuchatanga vakawanda kurimwa muna 2022. mudzimba yemagetsi motokari Turkey yokutanga, France guru, wechipiri-ruoko kunotenga chikuva aine nyepera kuti leboncoin "akaenda pasero."
Anenge asingazivikanwe munhu muLeboncoin munguva pfupi yapfuura akazivisa kutengesa mota yekumba inokurudzirwa neMutungamiriri Recep Tayyip Erdoğan. Mushandisi, uyo anoti akafamba zviuru gumi nemaviri makiromita ane 2020 magetsi TOGG brand mota, akagovana kushambadzira kubva kuaccount isingazivikanwe.
RIMWE DZIMWE 5 JANUARY
Iko kushambadzira kwekunyepedzera kwemushandisi akagovana mifananidzo yemotokari yepamba hakusati yabviswa kubva pane ino saiti. Mune chiziviso chakaitwa Ndira 5, mutengo wemotokari wakapihwa sezviuru makumi matatu zvemadhora.
Turkey kwaiita Cars Initiative Group (TOGG), unotanga kugadzirwa muna 2022. Turkey raMwari mumhuri motokari wakatangwa musi December 27 ari mhemberero yakaitwa Gebze. Ruzivo nezve kugadzirwa kwemotokari dzemagetsi dzakavhenekerwa pazuva rimwe chete nedanho reMutungamiriri rakaburitswa muGazezi Gurukota.
Turkey kuti zvizvarwa motokari yemagetsi rokutanga